Waa maxay qolof? | Laga soo bilaabo Linux
jorgemanjarrezlerma | | Muuqaal / Shakhsiyeyn
Dhowr saacadood ka hor ayaan wax ka qoray GNOME Shell iyo mustaqbalkiisa oo akhriste wuxuu tixraacay wax aan u arko inay muhiim tahay in laga fiirsado, waa maxay qolof?.
Hagaag ahaan qeexitaan ahaan waxaan haynaa: Xisaabinta, erayga qolof waxaa loo isticmaalaa in lagu tixraaco barnaamijyada bixiya isku xirnaanta adeegsadaha si loo helo adeegyada nidaamka qalliinka. Kuwani waxay noqon karaan sawir gacmeed ama qoraal iska cad, iyadoo kuxiran nooca isku xirnaanta ay adeegsadaan. Shells waxaa loogu talagalay inay fududeyso habka barnaamijyada kala duwan ee kumbuyuutarka laga heli karo loogu yeero ama lagu fuliyo..
Waa in la ogaadaa inay jiraan 2 nooc oo Shell ah kuwana waa:
Qolofka qoraalka ee guud sida bash, emacs, Windows amar degdeg ah, iyo kuwo kale.
Qolofka shaxda guud sida GNome, KDE, XFCE, LXDE, Midnimo, MacOS Desktop Deegaanka, Windows Desktop, iyo kuwo kale.
Markaa waxaan ku soo koobi karnaa in Shell uu ereyo yar ku yahay deegaanka desktop (DE) ama Maamulaha Windows (WM) ee aan u adeegsano kumbuyuutarradeena, iyadoo aan loo eegin qeybinta aan u isticmaalno ama loo maro GUI ama (garaafyada bay'ada) ama terminalka ku saabsan isdhexgalka aan u baahan nahay si aan u awoodno inaan adeegsanno adeegyada iyo codsiyada ay soo bandhigaan nidaamyada hawlgalku.
Isla qeexitaankan ayaa markaa lagu dabaqi karaa aaladaha mobilada sida taleefannada casriga ah iyo kiniiniyada leh labada nooc ee Android, iOS ama Windows Phone; maaddaama tan dambe ay yihiin nidaamyo hawlgal oo lagu qaabeeyey DE ama WM.
Marka, KDE waa Shell, XFCE waa Shell, LXDE waa Shell, iOS waa Shell, Android waa Shell, Windows Phone waa Shell, terminalku waa qolof (via bash), marka maxaan ka dhihi karnaa GNOME 3 waxay ku saabsan tahay is dhexgalka iyo muuqaalka wax kale. Isbedelku wuxuu ahaa mid xagjir ah: HAA.
KDE iyo / ama xubnaha bulshada waxay ku tijaabiyaan jawi leh falsafad "la mid ah" (yaan la dhihin wax la mid ah) tan maanta loo isticmaalo mashruuca Gnome, maadaama qeexitaan ahaan KDE sidoo kale loogu yeeri karo KDE Shell.
Dhammaan waxa lagu sharraxay tuducyadii hore, waxaan ku dhiirran karaa in aan idhaahdo GNOME 3 (Shell) wuxuu leeyahay mustaqbal haddii dadka qaar ay jecel yihiin ama kuwa kaleba ay neceb yihiin.
FIIRO GAAR AH: Qeexitaanka iyo noocyada qolofka aan ka soo qaatay Wikipedia, iskuxiraha ayaa ah tan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Muuqaal / Shakhsiyeyn » Waa maxay qolof?
Hagaag, haddii taasi ay tahay qeexitaanka qolof, markaa qolofleydu waxay leeyihiin mustaqbal.
Laakiin deegaanka desktop-ka ee Gnome (faham GNome-shell) ma haysto ilaa ay ka dhigeyso mid la qaabeyn karo sidaan horayba ugu sheegay boostada kale.
Waxaan rabaa inaan carrabka ku adkeeyo inaanan ka soo horjeedin qolofka, kaliya midka gnome3, kaas oo ra'yigeyga ama sida aan u baahanahay aan aheyn mid wax ku ool ah.
Waayahay !! Hadda way ka sii fududahay ama way ka sii caddaatay ... Waan fahamsanahay in Degaanka Desktop (DE) iyo Maareeyayaasha Daaqadda (WM) ay ku dhacaan kala sooca qolofta ...
Waad ku mahadsantahay cadeynta
Waxaan u maleynayaa in soo galitaanka iyo cadeynta ay qumman yihiin. Waxaan u maleynayaa in aan in ka badan ama ka yar ogaa waxa Shell uu ahaa, in kasta oo ay run tahay in ay timaaddo in la cusbooneysiiyo fikradaha iyo in la ogaado oo aan la iloobin in aan isku dayo in aanan joojin qolof (xariiq amar). Waa hal interface kale laakiin waa qoraal. Waxaan u maleynayaa maareeyaha desktop-ka inuu yahay wadarta WM + Shell + qalab kale. Waa qayb ka mid ah xiisaha ama shilalka in lagu daro gelitaankan maxaa yeelay waxaan hadda la yaabay sida aan u rakibi karo Arch (rakibaadda ugu yar), aniga oo aan rakibin Gnome Shell, si loo rakibo Cinnamon (oo aan fahamsanahay inuu yahay Shell kale). Ma aqaano haddii aan ku sameyn karo iyadoo la adeegsanayo cabbiro gaar ah oo leh pacman (–gango ama wax la mid ah). Aniguna waxaan jeclaanlahaa inaan rakibo LightDM-Ubuntu halkii laga dhisi lahaa GDM oo haddii ay suuragal tahay aanad rakibin Nautilus si aad isugu daydo mid kale sida Nemo, Pantheon, iwm. Xoogaa sida Cinnarch sameeyo laakiin aniga ayaa sameeynaya. Laakiin waa faallo fudud maxaa yeelay waxaan horey u idhi waxaan si hagar la’aan ah uga fakaraayay sida AAN loo rakibo Gnome Shell oo lagu badalo mid kale sidaasna aan ku rakibo waxyaabaha muhiimka ah.
Salaan iyo mahadsanid qoraalka;).
Looma baahna in la abuuro qeexitaanno. Rasmiga ah "qolof" ee KDE SC 4 waxaa loo yaqaan Plasma wax badana kuma lahan GNOME Shell (mahadsanid). Rasmiga ah "qolof" ee loogu talagalay GNOME 3 waxaa loo yaqaan 'GNOME Shell' maxaa yeelay horumariyeyaasheeda ayaa sidaas doonayay. Iyo tixgelinta KDE deegaan ahaan (maahan sida bulshada ay tahay) waa la aqbali karaa wadahadalka aan rasmiga aheyn laakiin waa qalad (Wikipedia waxay oran kartaa tiro) maxaa yeelay kuwa soosaara KDE SC 4 ma aqbalin fudeydkan mudo dheer. GNOME waxay ku leeyihiin siyaasad kale, bulshada iyo deegaanka labadaba waxaa lagu magacaabaa isku mid.
Hadda markaan ka fikiro waad saxantahay, sidoo kale kuma raacsani in lxde ay qolof tahay, waa uun jawi desktop ah sida XFCE iyo kuwa kale, laakiin sidaan idhi, qolofka xun waa gnome-ka kuwa kale ma jiraan cabasho, yaa yeelan kara cabashooyinka Plasma (Ilaa aad kumbuyuutar ku rakibtay 256 wan).
Dhab ahaan Waxaan u maleynayaa inay jiraan wax xiiso leh waxaad ku darsato: KDE (si aan rasmi ahayn uhadal) maahan Shell, laakiin waa Desktop Environment, Plasma-na waa KDE Shell. Laga yaabee inaan khaldanahay, laakiin fikradaha Shell iyo DE shaqo kuma laha.
Uma arko inay isku mid yihiin. Aniga hal shay ayaa ah desktop-ka (garaafka garaafka ah ee raacaya tusaalaha desktop) wax kalena waa jawiga desktop-ka (halkaasoo desktop-ka iyo qeybaha kale ay ku jiraan). Tani waxay noqon kartaa jahwareer laakiin waxaa lagu milmi karaa tusaalooyin. GNOME 3 waa jawi desktop ah iyo GNOME Shell, Unity, iwm. Waa miisaska kumbuyuutarrada (GUI ama garaafyada "qolofta").
Dhab ahaan, Desktop waa halka aan ku leenahay gidaarka gidaarka, guddiga, astaamaha qashinka iyo wixii la mid ah. Deegaanka Desktop waa dhamaan aaladaha iyo walxaha ka shaqeeya Desktop-ka iyo shellku waa qurxin aan ku dul dhigno desktop ama desktop cusub 😀
Haddii aad ku qanacsan tahay inaad sax tahay, laga yaabee inaad Wiquipedia ka saarto qaladkeeda ...
Waa ilo loo arko inay tahay mid la isku halleyn karo laakiin aan khaldami karin arrintanna, waxay u muuqataa inay khalad tahay, ama maya? ...
@ José Miguel, Wikipedia waxaa gacanta ku haya nafley aan naf lahayn oo dadku ugu yeeraan maktabada. Alaabada ay ku ciyaaraan ayaan u qalmin in la taabto (haddii aadan rabin inaad ka mid noqotid mooyee).
Wikipedia waxay iskaga soo horjeedaa bogag badan oo ka mid ah. Kaliya waa inaad aragtaa waxa ay ka qorayaan Midnimada xiriiriyeyaashaan:
Sida muuqata Midnimadu waa jawi desktop loo dhisay jawiga desktop-ka ee GNOME. Waa sida matrioska.
taasi waa sababta tan "KDE SC"
Hagaag, waxaan sameeyay qoraalkan aniga oo tixraacaya faallo u muuqatay mid waqtigeeda ku habboon. Qof kastaa wuu ku saxsan yahay sheegashadiisa iyo faallooyinkiisa maaddaama KDE ay tahay DE iyo Plasma qolofka, waxaan u arkaa in gnome uu mideynayo labadan xaaladood 2 keliya. Hadday fikraddu wanaagsan tahay ama xun tahay, anigu garan maayo, haddii ay mustaqbal leedahay, waqtiga ayaa sheegi doona.
Waxaan u arkaa in gnome uu si tartiib tartiib ah u siinayo qaab iyo nuxurka "cusub" DE + Shell isbadalada iyo hagaajinta lagu sameeyay dib u eegista 6 iyo dib u eegista mustaqbalka 8 waxaa ku jira aalado kale oo u oggolaanaya xoogaa fudeyd yar (gaar ahaan GUIsers), tan iyo markii boosteejada iyo hagaajinta CSS waxaad heli kartaa jawi muuqaal ahaan raalli ka ah iyo miis shaqo oo wax ku ool ah.
Waxaan su'aal ka qabaa midnimada miyaa 3 qolof ah oo lagu sameeyay Qt? Marka laga hadlayo KDE, waan fahamsanahay waxa Windóusico ka muujisay «Qolofka rasmiga ah ee KDE SC 4 waxaa loo yaqaan Plasma»
PS: oo xaji qolofta gnome !!!
[quote = piayet] [quote = piayet] Qof ma ii sheegi karaa maxay ku kala duwan yihiin Gnome 3 iyo Gnome Shell? [/ quote]
haha capo, waad ku mahadsan tahay jawaabta ...
Ku jawaab Piayet
Aniga waa faallooyinka kaliya ee leh windows hehehee xd
Ku jawaab shinta
Waxaan rabaa qof iga caawiya sida loo rakibo barnaamijyada ka hoos shaqeeya daaqadaha FEDORA 17
Waxaan ka tijaabiyey TERMINAL laakiin waxay ii sheegaysaa inuu jiro fayl rakibmay oo u baahan nooc kale.
Waqtigan xaadirka ah ma xasuusto laakiin waa wax u eg config iyo nooc 2.8.0.6 kii la rakibeyna waa 2.8.0.8 Waxaan aaday webka feylkaan ama wadayaasha halkaasna waxay umuuqataa inay i weydiineyso terminal markay i siiso qalad laakiin markaan rabo inaan rakibo waxay ii sheegaysaa in nooc la cusbooneysiiyay la rakibay.
Fikradda aan haysto ayaa ah inaan ka tirtiro nooca ugu dambeeya ka dibna aan rakibo nooca duugga ah. kaliya ku saabsan Linux Ma aqaano waxa amarku noqon lahaa in la tirtiro taas.
Ama haddii ay jiraan barnaamijyo kale oo aan ka ahayn khamri iyo wax-u-qabad si loo rakibo. markaa isku day mid kale oo laga yaabee inaad orod ...
Arrinta kale waxay tahay aniga ayaa rakibay dhambaalka laakiin kuwa la rakibey kaliya waxay xirayaan fariinta hotmail. Waxaan ula jeedaa koontadayda hotmail-ka oo yahoo khalad ku soo dirta.
Ugu dambeyntiina, xagee ka helaa ciyaaryahan leh cod wanaagsan sida windows media player 11 iyo nooca 12.
waxa fedora 17 leh codkaas wanaagsan. waa codkaas sorrund
mfcollf77 maxaad u waydiin weyday su'aasha ku jirta golaha taas oo aan taa u ahayn?
Ma eedeynayo kuwa cusub, waxaan ahaa isticmaale GNU / Linux sanado badan waxyaabahaasna wali wey i wareersan yihiin 🙂
Laakiin way fiicnaan laheyd haddii qoraaga boostada uu inyar ka baaray oo uu saxo khaladaadka. Waxaa laga yaabaa in fikradda guud ee ah waxa qolof garaafku yahay xisaabinta ay noqon karto mid xoogaa sax ah, laakiin aan loo adeegsan erayga Shell ee GNU / Linux.
@elav aad ayuu ugu guuleystey fikradihiisa. Sidoo kale, Wikipedia (labadaba Isbaanish iyo Ingiriis) waxaa ku jira macluumaad aad u wanaagsan.
* Meelaha Desktop: KDE, GNOME, Xfce, LXDE, iwm
* Maamulaha Daaqada: KWin, Metacity, Mutter, Enlightenment, Xfwm, iwm
* Iskuxirka isticmaalaha sawirada (User Iinterface): KDE waxay ugu yeeraan goobta shaqada waxaana jira sedex: Plasma Desktop (Desktops), Plasma Netbook iyo Plasma Active (aaladaha mobilada). Qeybta dambe gabi ahaanba ma ahan Goobta Shaqada laakiin waa muuqaal adeegsade muuqaal ah.
GENOME waxaan ku leenahay GNOME Shell oo ah mas'uulka mashruuca iyo Midnimada Ubuntu.
Ku jawaab YAFU
Faallooyinka aan kor ku akhriyey, waxay umuuqdaan inay sax yihiin. Wikipedia-ka Isbaanishka wuxuu umuuqdaa mid aan ka kalsooni badnayn kan Ingiriisiga.
Waxa ugu kalsoon ayaa ah in lala tashado boggaga rasmiga ah ee mashruuc kasta. Sidan ayaad uga fogaanaysaa cacaos maskaxeed.
Si aad u yara caddaalad ahaato, qofkeen kasta oo ka mid ah ayaa tafatiri kara oo saxi kara gelitaanka Wikipedia. Laakiin anigu sidoo kale waxaan qabaa fikradda ah in taas la sameeyo waxa ka wanaagsan in aad loogu habboonaado mawduuca oo leh hubaasha ugu weyn waxa la qorayo. Waxaanan u maleynayaa inay taasi tahay waxa ku dhacaya Wikipedia ee Isbaanishka, iyada oo ujeedadu tahay in lala kaashado qof kasta wuxuu ku darayaa qoraallada xitaa haddii uusan cilmi baaris ku filan ka sameynin mawduuca.
Waxaan mar labaad weydiisanayaa qoraaga balooggu inuu cadeeyo fikradaha, maxaa yeelay kaliya waxaan ka fikirayaa laga soo bilaabo sidan oo kale waxay dhihi karaan KDE waa Shell oo kaliya, waxay isiineysaa goose goos goos ah 🙂
Qeexitaan wanaagsan, mahadsanid
Waxaa laga yaabaa inaan khaldanahay, laakiin waxaan u maleynayaa in waxa aad tilmaamtay aysan gebi ahaanba sax ahayn, maadaama haddii aan ku dabaqno qeexitaankaaga, Gnome-Shell * haddii * uu yahay qolof, sida KWin oo kale, laakiin marnaba sinnaba Gnome iyo / ama KDE (kama faalloonayo kombuyuutarrada kale maadama aanan garaneyn iyaga iyo labadan midkood).
Dhinaca kale, waxaa lagu hagaajin karaa qeexitaankaaga marka loo eego daaqadaha Maareeyaha oo kale (AfterStep, Enlightenment, FluxBox, WindowMaker, Fvwm, iwm). Laakiin sidaas oo ay tahay sidaas oo kale sidaas ma noqon doonaan, maadaama ay la falgalaan nidaamka nidaamka X ayaa ku lug leh, iyo Maareeyaha Daaqadda ayaa kaliya noqon doona qolof la falgalaya nidaamka garaafka X (wax sidoo kale, si gaar ah, waxaa lagu dabaqi karaa kombuyuutarrada kale).
Laakiin sidaan idhi, waxaa laga yaabaa inaan anigu ahay kan qaldan ...
Jawaab Manuel Trujillo
Ma jecli qolofta 😛
Jawaab briseida iras lopez jimenez
Ubuntu / Kubuntu iyo waxyaabaha ka dhasha waxay hoos u dhigaan cabirka CD-ga